Ethiopia launches second Chinese-backed satellite - China.org.cn
An Ethiopian official on Wednesday disclosed Ethiopia has launched its second Chinese-backed satellite.
"Preliminary design was conducted in Ethiopia, while detailed and technical works were undertaken in collaboration with Chinese experts in China through zooming and other platforms," Alemayehu told the state-owned daily newspaper Ethiopian Herald.
"The 8.9 kilograms nano satellite is a great achievement of Ethiopia in a number of ways. The institute will keep on working to further strengthen the effort in technology transfer and human development," he further said.
The satellite preliminary design was done in Ethiopia, while the technical and detailed design was conducted by a joint Ethiopian-Chinese engineers' team.
In recent years, China has forged partnership in developing Ethiopia's space science sector, whereby it has closely worked with Ethiopia's Ministry of Innovation and Technology (MoIT) to train Ethiopian space engineers as well as help in the launch of micro-satellites.
​An Ethiopian official on Wednesday disclosed Ethiopia has launched its second Chinese-backed satellite.